दसैं अवसरमा नेपाल टेलिकमको ल्यायो बोनस र बिशेष छुट सुबिधा, हेर्नुस कति पाउने भए ग्राहकले !
काठमाडौं । आसन्न महान चाड विजयादशमीको उपलक्ष्यमा नेपाल टेलिकमले विगतका वर्षमा जस्तै यसवर्ष पनि विभिन्न अफर ल्याएको छ । भोलि (बुधबार)बाट कात्तिक ७ गतेसम्म खरिद गर्न सकिने गरी अनलिमिटेड प्याक भ्वाइस प्याक डाटा प्याक रिचार्जमा बोनस र एडीएसएल एफटीटीएच वाइम्याक्ससेवामा टेलिकमले दसैं अफर ल्याएको हो ।
अनलिमिटेड प्याक अफरअन्तर्गत जीएसएम तथा सीडीएमए मोबाइलमा अनलिमिटेड भ्वाइस र अनलिमिटेड एसएमएस सेवा उपभोग गर्न सकिने छ । रु. ६०० मा १५ दिन समयावधिको लागि प्रत्येक दिन २ जीबी प्याक उपलब्ध गराइने छ । यो प्याकअन्तर्गत १ जीबी पिक आवर (बिहान ६ बजेदेखि राति १० बजेसम्म) र १ जीबी अफपिक आवर (राति १० देखि बिहान ६ बजेसम्म) प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
सोही प्याक ७ दिन समयावधिका लागि मात्र रु. ३०० मा समेत उपलब्ध हुने टेलिकमले जनाएको छ । सो प्याक लिने सेवाग्राहीलाई वाउटाइम र म्युजिक नेपालको म्युजिक स्ट्रिमिङ सर्भिससमेत निःशुल्क उपलब्ध गराइने छ ।
यस्तै भ्वाइस प्याक अफरअन्तर्गत रु. ६ मा निरन्तर ६० मिनेट भ्वाइस सुविधा उपभोग गर्न सकिने छ । एक दिनका लागि मात्र उपलब्ध हुने सो सुविधा बिहान ६ बजेदेखि बेलुकी ६ बजेसम्म प्रयोग गर्न सकिने छ ।
भ्वाइस सुविधा नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा मात्र प्रयोग गर्न सकिने छ । डाटा प्याकमा पनि टेलिकमले विशेष अफर ल्याएको छ । यस अफरअन्तर्गत ३६ एमबी डाटा रु. ६ मा एक दिनका लागि उपलब्ध हुनेछ । सो डाटा पनि बिहान ६ बजेदेखि बेलुकी ६ बजेसम्म प्रयोग गर्न सकिने छ ।
अफर अन्तर्गतका विभिन्न प्याकेज प्राप्त गर्न ग्राहकले *1415*9# डायल गर्नु पर्नेछ । कम्पनीको एप ‘नेपाल टेलिकम’ बाट पनि प्याकेज खरिद गर्न सकिने टेलिकमले जनाएको छ ।
यस्तै आगामी असोज २९ देखि कात्तिक ४ गतेसम्म रिचार्ज कार्ड, इलेक्ट्रोनिक रिचार्ज वा एमपोसबाट रिचार्ज गर्दा बोनस प्रदान गरिने भएको छ ।
रु. १०० र २०० को रिचार्ज कार्ड वा इलेक्ट्रोनिक रिचार्जमार्फत रिचार्ज गर्दा १० प्रतिशत र रु. ५०० र १००० को रिचार्ज कार्ड वा इलेक्ट्रोनिक रिचार्जबाट रिचार्ज गर्दा १५ प्रतिशत बोनस प्राप्त हुनेछ ।
रु. १०० र २०० को बोनस ३ दिनभित्र र रु. ५०० र १००० को बोनस ५ दिनभित्र उपभोग गरिसक्नु पर्नेछ ।
त्यसैगरी एमपोसबाट जतिसुकै दरको रिचार्ज गर्दा पनि १५ प्रतिशत बोनस उपलब्ध हुनेछ र सो बोनस ५ दिनभित्र उपभोग गरिसक्नु पर्नेछ ।
यसैगरी असोज ३० देखि कात्तिक ६ गतेसम्म एडीएसएल एफटीटीएच वाइम्याक्सको समयावधि समाप्त हुने ग्राहकहरुको समयावधि कात्तिक ७ गतेसम्म थप गरिने छ । यसबाट बीचैमा समय सकिए पनि ग्राहकहरुको सेवा सुचारु भइरहने छ ।
Posted in समाचार, सूचना-प्रबिधि
२३ आश्विन २०७५, मंगलवार १७:३८ 09/10/2018 by महेश शर्मा
कलेजमा अन्धाधुन्ध गोली प्रहार, १९ जनाको मृत्यु
लागुऔषधसहित श्रीमान श्रीमती समातिए
आज महानवमी : नवरात्रिको अन्तिम दिन विशेष पूजाअर्चना
प्रधानमन्त्री ओली आज गृहजिल्ला झापा जादै
श्रीपेच सार्वजनिक भए लगतै पूर्वराजाले किन गरे गणतन्त्रमाथि प्रहार